Manomàna hafatra tsy misy alalana ho an'ny fialan-tsasatra
Posted by Tranquillus | Mar 14, 2020 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Vonona ny ao an-trano rehetra, ao anatin'ny andro vitsivitsy dia fialan-tsasatra ianao. Nandray tahiry tamin'ny mpiara-miasa aminao ianao ho an'ny fikarakarana rakitra lehibe. Ity dia mety tsy ampy. Ny kolejy na ny mpanjifa izay afaka mifandray aminao dia tokony hampahafantarina anao ny tsy fisehonao.
Raha te hamerina ny sarin'ny fahamatorana sy ny maha matihanina dia manoro hevitra anao aho hiasa amin'ny fanomanana hafatra tsy misy arika. Afaka miomana raha, raha ny fandefasanao hafatra hafatra iray ho an'ny mpiara-miasa aminao ary iray hafa ho an'ny mpanjifanao. Na hafatra tsotra fotsiny ho an'ny olona ao anatiny na ivelan'ny orinasanao.
Ho an'ny fanamafisana: fitsangatsanganana dimy minitra ao amin'ny YouTube.
Eto amin'ireo mpampiasaOutlook ary ho an'ny an'ny Gmail.
Ohatra tsy misy hafatra voasoratra amin'ny fomba mahazatra
Tsarovy fa hafatra fampahalalana izany ary tokony hanazava ireo teboka sasantsasany.
Daty fanombohana sy fiafaran'ny fialantsasatra.
Lazao na mahazo miditra amin'ny hafatrao ianao na mandritra io fe-potoana io.
Raha azo atao dia ampidiro ny anaran'ilay olona hifandray raha sendra misy maika na maharitra.
Ary farano amin'ny alàlan'ny sonia elektronika na anaranao voalohany sy farany.
Fomba fanajana ny fahamendrehana dia tsy voatery ilaina amin'ity karazana hafatra ity. Miankina aminao, arakaraka ny teny manodidina, na te hampiditra azy ireo ianao.
Hafatra tsy misy mandeha ho azy: maodely isa 1
Nahazo ny hafatrao aho! Misafidy fialan-tsasatra aho izao ary hiverina amin'ny DD / MM / YYYY.
HAMAKY Toro-kazo taratasy hanaiky na handà ny fifandanjana amin'ny kaonty rehetra
Sambatra aho ny hamaly anao rehefa miverina aho.
Raha ilaina ny fandraisany anjara dia ny mpiara-miasa amiko (Anarana anarana LAST NAME + adiresy namany Sary) dia eo am-pelatananao.
Ny sonia elektronika.
Hafatra tsy misy mandeha ho azy: maodely isa 2
Tsy eo amin'ny fialan-tsasatrao miala amin'ny DD / MM / YYYY ka hatramin'ny DD / MM / YYYY.
Ho raisiko ny hafanao ary hohatoniko haingana ny valiny raha miverina aho.
Na izany aza, ny mpiara-miasa amiko Andriamatoa (anarana voalohany FARANY ANTOKO) dia hikarakara anao raha sendra misy maika.
Hafatra tsy misy mandeha ho azy: maodely isa 3
Misaotra ny hafatrao.
Tsy eo amin'ny DD / MM / YYYY mankany DD / MM / YYYY ianao ary hamaly haingana ianao rehefa miverina aho.
Raha ilaina, Andriamatoa (anarana voalohany NAME) dia hikarakara anao amin-jotom-po anao.
Hafatra tsy misy mandeha ho azy: maodely isa 4
Misaotra anao nifandray tamiko! Tsy eo amin'ny DD / MM / YYYY ka hatramin'ny DD / MM / YYYY no voatazona.
Noho ny antony tsiambaratelo, tsy mahazo miditra amin'ny mailaka aho mandritra io fe-potoana io.
Mazava ho azy fa manana ny fahafaha-manao ianao raha toa ka mitaky azy amin'ny fifandraisana Andriamatoa (anarana voalohany NAME) izay hamaly anao haingana.
Hafatra tsy misy mandeha ho azy: maodely isa 5
Voavonjy ny hafatrao.
Miala ao amin'ny biraon'ny DD / MM / YYYY mankany DD / MM / YYY dia ho ataoko ny mailaka rehefa miverina aho.
Raha sendra misy filana maika dia mangataha fifandraisana azafady Andriamatoa (anarana voalohany FARANY ANARANA anarana + mailaka).
Manomàna hafatra tsy misy alalana ho an'ny fialan-tsasatra May 13th, 2020Tranquillus
Teo alohaMahaiza mitantana amim-pahombiazana
manarakaIza no mahazo tombony amin'ny fiatoana amin'ny asa mifandraika amin'ny fanakatonana ireo sekoly? Raha manan-jo handoa azy ianao, manao ahoana ny habetsaky ny fotoana sy ny tambin-karama?
Tsy misy hadisoana diso tsipelina iray intsony miaraka amin'ny fomba Orthodidact
Manorata mailaka raha tsy eo ianao
Ahoana ny fomba fanoratana mahomby amin'ny asa?